बीपी प्रतिष्ठानमा उपचाररत ३५ वर्षीय काेराेना संक्रमित पुरुषकाे मृत्यु
Thu, Oct 1, 2020 at 6:01am
बुधबार, ३१ भाद्र २०७७,	आहाखबर
काठमाडौं, ३१ भदाै । काेराेना संक्रमणबाट धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । सप्तरीको खडक नगरपालिका ३ निवासी ३५ वर्षीय संक्रमित पुरुषको उपचारका क्रममा बिहान ६ः१० बजे मृत्यु भएको हो ।
प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाका अनुसार गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा कोरोना पुष्टि रिफर भएर बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३० गते भर्ना भएका थिए । उनी मिर्गौलाको समस्या रही हप्तामा २ पटक डायलासिस गर्दै आएका थिए ।
मृतकको शव व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको प्रवक्ता डा. सापकोटाले जानकारी दिए । योसँगै प्रतिष्ठानमा मृत्यु हुनेको संख्या २८ पुगेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा आज कहाँ कति संक्रमित थपिए ? यस्ताे छ विवरण
काेराेना संक्रमणबाट आज थप ७ जनाकाे मृत्यु, १ हजार ५७ काेराेनामुक्त
बुधबार देशभर १ हजार ५ सय ५९ काेराेना संक्रमित थपिए
काेराेनाबाट रुपन्देही र कपिलवस्तुमा दुई जनाकाे मृत्यु
यस कारण विहानको समयमा लामो श्वास लिनुपर्छ...
रुसले कोरोनाविरुद्धको खोपका २ करोड ५० लाख डोज नेपाल पठाउने
आज कोरोना संक्रमणबाट थप १० जनाको मृत्यु, कहाँ कति ?
नेपालमा आज थप ७ सय ३१ जना कोरोनामुक्त, निकाे हुनेकाे संख्या ५५ हजार नाघ्याे
मंगलबार काठमाडाैं उपत्यकामा कति संक्रमित थपिए ? यस्ताे छ पछिल्लाे विवरण
श्रृंखला खतिवडाकी आमालाई कारोना संक्रमण पुष्टि
प्रतिरक्षा प्रणाली सबल बनाउनका लागि कागती पानी, यस्ता छन् अन्य फइदा...
आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? 'विवरणसहित'